Voces Bolivianas: manaparitaka ny teny Aymara ao amin’ny Aterineto ny tetikasa Jaqi Aru · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Aogositra 2018 4:17 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, Aymara, Español, Português, polski, English
(Marihina fa tamin'ny 13 Septambra 2010 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ny Aymara dia fitenin'ny tompotany any Amerika Atsimo sy iray amin'ireo fiteny ofisialy ao Pero sy Bolivia. Misy mpampiasa ny fiteny Aymara miisa roa tapitrisa eo ho eo ao Bolivia ary efa ho telo tapitrisa ny isan'izy ireo any Amerika Atsimo. Nahatsapa ny mpikambana ao amin'ny tetikasa Voces Bolivianas izay tohanan'ny Rising Voices fa vitsy ny votoaty hita amin'ny fitenindrazan'ireo Aymara ao amin'ny aterineto. Nanangana ny vondrom-piarahamonina virtoaly Jaqi Aru i Ruben Hilary, miaraka amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo avy ao El Alto, Bolivia. Ny hanasongadina sy ny hanaparitaka ny fiteny Aymara ao amin'ny aterineto amin'ny alàlan'ny famoronana ny votoatin'ny fampitam-baovao nomerika, izay ahitana ny fandikanteny, ny fampiasana ny fitaovan'ny haino aman-jery sy ny media sosialy no tanjon'ny tranonkala Jaqi Aru.
Nihena tsikelikely ny mpampiasa ny fiteny Aymara noho ny fampiasana ny fiteny Espaniôla sy ny Quechua tao anatin'ny taonjato farany ary ankehitriny dia mpampiasa ny fiteny Aymara maro no miteny Quechua, fitenin'ny tompotany iray hafa any Amerika Atsimo. Nanamarika ny zava-misy iray mahaliana i Mario Duran:
Bolivia sy Però no manana mponina betsaka indrindra mampiasa ny fiteny Aymara, saingy manana tranonkala amin'ny fiteny Aymara betsaka kokoa i Shily izay manana mponina vitsy kokoa mampiasa ny fiteny Aymara.
Nahoana àry no ilaina ny mianatra ny fiteny Aymara sy ny mamoaka votoaty an-tserasera? Hoy i Sentir Bolivia nanoratra hoe:
Tena mahaliana izany, na ho an'ny mponina Boliviana ao an-toerana na ho an'ny any am-pielezana. Tianay ny hampiseho fa ny fiteny Aymara dia mbola velona hatrany hatramin'izay, ary miaina ao am-pon'ny vahoakanay. Tsy fiteny maty izany fa mbola ampiasaina sy mbola velona tsara.
Indro ny horonantsary misy ny fanazavana nataon'i Ruben Hilare sy Edwin Quispe tao amin'ny Barcamp Santa Cruz.
Ruben Hilary tao amin'ny Fihaonamben'ny Fampitam-baovaon'Olon-tsotra Global Voices. Sary natolotr'i Pawliszak Krzysztof
Nanomboka ny pejin'ny fandikanteny Aymara tato amin'ny Global Voices ihany koa i Ruben Hilary ao amin'ny Jaqi Aru sy Voces Bolivianas. Nandritra ny Vovonana Global Voices tamin'ny taona 2010 tany Shily ny volana May dia niresaka momba ny tetikasa Jaqi Aru i Ruben Hilary tao amin'ny fivoriana nitondra ny lohateny hoe “Ny fitenin'ny Indizeny an-tserasera – fanamby sy varavarana misokatra”. Indro ny ampahany tamin'ny fandraisana naoty tamin'ny fivoriana avy amin'i Eduardo Avila :
Ny hampitombo ny fisian'ny fiteny Aymara ao amin'ny aterineto amin'ny alàlan'ny hetsika miisa dimy lehibe indrindra no tanjon'ny tetikasa Jaqi Aru, ny iray amin'ireo dia ny fandikanteny ho an'ny tetikasa Lingua ao amin'ny tranokalan'ny Global Voices amin'ny teny Aymara. Nandika lahatsoratra avy ao amin'ny Global Voices amin'ny teny Espaniola nandritra ny 7 volana ireo mpilatsaka an-tsitrapo. Ankoatra izay, manana vohikala iombonana ho amin'ny famahanana bilaogy ny vondrona, ary mampiasa ny fitaovana web 2.0 toy ny Facebook, Flickr, ary YouTube, sy nianatra nanao ny dikantenin'ny lahatsary tao amin'ny sehatra DotSub, ary nanomboka nandray anjara tao amin'ny vondrom-piarahamonina Wikipedia amin'ny fiteny Aymara .
Zava-dehibe ho an'ny tanora izany rehefa mikaroka vaovao izy ireo. Tsy dia mahita vaovao maro amin'ny fiteny Aymara izy ireo ary atao ny ahitana izany amin'ny aterineto. Ankoatra izay, ny fiaraha-miasa amin'ny Wikipedia amin'ny fiteny Aymara dia mety hanamora izany kokoa ho an'ny olona any amin'ny faritra ambanivohitra ao amin'ny firenena amin'ny fanaraham-baovao amin'ny fitenin'izy ireo manokana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fahafahana ivelan'ny aterineto . [..]
Q. Momba ny inona ny lahatsoratra soratan'ireo tanora Aymara ?
Monina ao an-tanàndehiben'i El Alto, tanàna feno mpifindra monina avy any Altiplano ny ankamaroan'ny mpikambana ao amin'ny tetikasa Jaqi Aru. Nifindra tao an-tanàndehibe tamin'ny andron'ny fahatanorany ny olona sasany, ny hafa tamin'ny fahazazany, ary mbola maro hafa no teraka tao an-toerana. Na izany aza, manana havana avy any amin'ny vondrom-piarahamonina niavian'izy ireo ny tsirairay. Matetika izy ireo no mody any aminy rehefa misy fety na hitsidika havana, ary matetika izy ireo no manoratra momba ny vondrom-piarahamoniny. Misy sary mahaliana marobe nalain'ny mpikambana sasantsasany izay tsy azon'ny mpizahatany na ireo Boliviana hafa nalaina sary, ary hita taratra ao amin'ny bilaogin'ny vondrona izany.
Ireto misy sary vitsivitsy tamin'ny hetsika Jaqi Aru avy ao amin'ny pejy Flickr Voces Bolivianas sy Jaqi Aru:
Ruben Hilary nandritra ny valan-dresaka an-gazety
Fampahafantarana momba ny Jaqi Aru
Ny Ekipan'ny Jaqi Aru